Is Foldable Phone the Future or JustaGimmick? - MADLAB
Incidentally, not many people know that these are not the world’s first foldable phones. Back in November of 2018,arelatively small phone manufacturer called Royale releasedaphone called The Royole FlexPai, and it seems like the only reason they made it was to be the first Foldable phone ever. A lot of people called it ugly for its design; it is not comparable to the ones from Samsung and Huawei, and it never made it into Myanmar phone market. Apparently, Xiaomi’s foldable phone prototype has been leaked inavideo. Lenovo owned Motorola Company is also reportedly working onaFoldable version of their RazorPhone.
Xiaomi Leaked Prototype
With all these companies jumping on this foldable bandwagon, the question still remains, should you buy it, even if the price is affordable? Is foldable phone the future?
Flexible screen technology has been in the news since the start of this decade. We have seen countless concept art displays on the internet. Nearly all the display manufacturers have shown their big and small foldable display at an exhibition, but it was never intended for mass release until now. It is finallyareality, but the huge price tag and the practicality of the flexible technology are making us wonder, do we really need it?
The phone industry is hungry for more fresh ideas and innovation, as the last three years with phones are more or less the same in terms of technology. Now the phone manufacturers are projecting foldable phones as their next big thing.
Price has always beenafactor in how people decide to buy their phones. Even if the technology becomes normal in the future and every phone manufacturer offersafoldable version along with their flagship ones,afoldable phone will still be more expensive than the normal flagship phone. With the flagship phones already costing 1,000$ (1,500,000 kyats), will people buy the Foldable Phone, or will the phone manufacturers keep making these just for the novelty of the foldable display?
The folding screen technology in itself is very exciting, in the near future; we will surely be seeing them in E-book readers, maybealaptop withabendable screen that also serves asakeyboard. The military can take advantage of this technology by using it on their gadgets and in space exploration they can use it on their spacesuits.
Right now it is very apparent that the technology is still in its infancy even though hardware engineers have been working on it for the better part of this decade. It might spark people’s interest but the price tag doesn’t seem like it is intended for the mass-market customer. Samsung has confirmed that they will be selling Galaxy Fold with limited supply.
The majority of the people who will buy the foldable phones are either tech fans who want to try this new technology or someone who needs the practicality of usingaphone that can also beatablet at the same time. The only question right now is whether you want to be an early adopter or not, and will it still be relevant three or four years down the line?
ခေါက်ဖုန်းတွေဟာ အနာဂတ်လား ဈေးကြီးတဲ့ ကစားစရာသက်သက်ပဲလား
ရှေ့လတုန်းက ဖုန်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှ ခေါက်ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်ခဲ့တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်နော်။ Samsung Galaxy Fold သည် အတွင်းဘက်သို့ခေါက်ထားပြီး နောက်ကျောဘက်တွင် ၄.၆ လက်မရှိတဲ့ မျက်နှာပြင် အသေးတစ်ခုပါရှိတယ်၊ Huawei Mate X ကျတော့ မျက်နှာပြင်အပြင်ဖက် ကို ခေါက်သွားပြီး Samsung Galaxy Fold နှင့်ယှဉ်ကြည့်လျှင် ပိုမိုသပ်ရပ်တယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ ဖုန်းနှစ်ခုလုံး ယခုဈေးကွက်ထဲက ဈေးအကြီးဆုံးဖုန်းတွေထက်တောင် ပိုပြီးဈေးကြီးနေတာကို တွေ့ရတယ်။ Samsung Galaxy Fold က ၁၉၈၀ ဒေါ်လာ (၃၈သိန်း ဝန်းကျင်) ရှိပြီး Huawei Mate X ကတော့ ၂၆၀၀ ဒေါ်လာ (၃၉ သိန်း) ထိ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို ဈေး ကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်။
Samsung Galaxy Fold ဟာ ပထမဆုံးဖုန်းထွက်လာတဲ့ ခေါက်ဖုန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာတုန်းက လူသိမများတဲ့ Royale ဟုခေါ်သော ဖုန်း company တစ်ခု မှ Royale FlexPai ဟုအမည်ပေးထားတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးထွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်း ကြည့်ရတာတော့ ပထမဆုံး ခေါက်ဖုန်း ဖြစ်ဖို့သက်သက် သာထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ရတယ်၊ ရုပ်ဆိုးတယ် ဟုဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်၊ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Samsung တို့ Huawei တို့နဲ့ယှဉ်လို့မရဘူး ၊ မြန်မာ ဖုန်းဈေးကွက်ထဲကိုတောင် မရောက်ခဲ့ပါဘူး။ Xiaomi ဖုန်း ကုမ္ပဏီမှလည်းမမိတ်ဆက်ရသေးတဲ့ခေါက်ဖုန်း အသုံးပြုနေပုံ ဗီဒီယို တစ်ခုပေါက်ကြားသွားခဲ့ တယ်၊ Motorola မှာလည်း ခေါက်လို့ရတဲ့ RazorPhone ထုတ်လုပ်နေကြောင်း သတင်းများထွက်လာတယ်။ အခုလိုဖုန်း ကုမ္ပဏီတိုင်းလိုလို ခေါက်ဖုန်းများ ထုတ်လုပ်နေကြပြီဆိုတော့ ကျန်တော်တို့အနေနဲ့ ခေါက်ဖုန်း နည်းပညာကို အသုံးပြု သင့်ပါသလား၊ ခေါက်ဖုန်း နည်းပညာက တကယ် အသုံးဝင်နိုင်သလား ဆိုတာကို မဝယ်ခင် မေးခွန်းထုတ်ရတော့မယ်။
ခေါက်နိုင်တဲ့ Display ကို ပြီးခဲ့တဲ့ လေးငါးနှစ်အတွင်း သတင်းတွေထဲဖတ်မိကြမှာပါ၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း အစမ်း ဒီဇိုင်းတွေ အများကြီးတွေ့ရမှာပါ၊ နည်းပညာအသစ်အဆန်းပြပွဲတွေမှာလည်း ကုမ္ပဏီ တွေကကွေးခေါက်နိုင်းတဲ့ display များကိုထုတ်ဖော်ပြသသွားတယ်။ အခုမှပဲ တကယ်ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့ နည်းပညာဖြစ်လာတော့တယ်။ သို့သော်လည်း လူကိုလန့်သွားလောက်စေတဲ့ ဈေးနှုန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ ပြန်စဉ်းစားရပြန်ရော၊ အဲ့လောက်ဈေးကြီးနဲ့ အဲ့ဖုန်းက ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့သုံးရတာတန်ပါ့မလားပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့သုံးလေးနှစ်အတွင်းကဖုန်းတွေက နည်းပညာပိုင်းမှာအထူး အဆန်းမရှိခဲ့ဘူး၊ အခုတော့ဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေက ခေါက်နိုင်တဲ့ ဖုန်းနည်းပညာအား စိတ်လုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အသစ်အဆန်းနည်းပညာ တစ်ခု အဖြစ်နဲ့ ပွဲထုတ်ဗန်းပြ လာတာပါပဲ။
ဖုန်းဝယ်တော့မယ်ဆို ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်ကြတယ်မလား။ ခေါက်ဖုန်းတွေကတော့ သာမာန်ဖုန်းတွေကို အစားထိုးမသွားနိုင်ဘူးဆိုတာကတော့ ကျိန်းသေပါပဲ၊ ဈေးကျသွားရင်တောင်သာမာန် ဖုန်းတွေထက်ပိုပြီးဈေမပေါ့နိုင်ပါဘူး။ ယခုဈေးကွက်ထဲ ဈေးကြီးဖုန်းတွေတောင် ၁၀၀၀ ဒေါ်လာ လောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ ခေါက်ဖုန်းတွေကို ဝယ်သုံးကြမှာလား ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကပဲ နည်းပညာအသစ်ဆိုပြီး ဈေးကြီးကြီးနဲ့ ပဲဆက်ထုတ်နေမလား ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါက်ဖုန်းတွေဟာ နည်းပညာအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျရင် E-book reader နှင့် Laptop တွေမှာလည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒီ နည်းပညာကို စစ်ရေးပိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်သလို အာကာသစူးစမ်းရှာဖွေရေးများတွင်လည်း အသုံးဝင်လာနိုင်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်မှန်းထားကြတယ်။
ယခုအချိန်မှာတော့ နည်းပညာရဲ့ပထမ အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စား မှုကိုရရှိနိုင်ပေမယ့်ဈေးနှုန်းဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုက ကန့်သတ်ချက်လိုဖြစ်နေတာ ကြောင့်အများသုံးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီးထုတ်လုပ်တာမဟုတ်မှန်းသိသာနေတယ်။ Samsung Galaxy Fold ကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်နှင့်ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့လည်း Samsung က အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်။
ယခုချိန်မှာတော့ ခေါက်ဖုန်းကို နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ ခေါက်ဖုန်းကိုမှ သုံးချင်သူတွေပဲဝယ်ယူဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းပညာဟာနောက် သုံးနှစ်ငါးနှစ်အတွင်းမှာမရှိမဖြစ် လူသုံးများလာမည့် ဖုန်းဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။